Automatic ranomandry efajoro mofomamy natao milina fanaovana mofomamy - China Shanghai Hanjue milina
Table encrusting karazana milina
Automatic encrusting milina
Automatic encrusting sy ny fampifanarahana milina
Mofo Bun pamokarana
Soanambo nifanizina Bun pamokarana
Cake mofomamy milina
Atody tarta milina
Automatic coxinha encrusting milina
Milina kely fanaovana nastar
Automatic croquetas croquette milina fanaovana
Automatic mena sokatra milina fanaovana mofomamy
Automatic atody custard tarta milina fanaovana
Automatic ranomandry efajoro mofomamy natao milina fanaovana mofomamy
Description: Ny namorona azo namboarina mofomamy amin'ny famolavolana karazana. Toa fomba maro mba hahatonga ny mofomamy, ny sasany kely fivarotana sy ny vehivavy mpikarakara tokantrano manao amin'ny tanana ny sakafo, dia manana mahagaga vidiny sy ny samy hafa ny olona toy izany taona sakafo. Soa ihany fa ny HJ-860 encrusting milina afaka ny sakafo avo fahaizana. Ny injeniera dia hanampy ny tariby Hetezo milina manao ny mofomamy, fomba izany dia afaka hamonjy vola sy ho tsara tarehy mofomamy. Afaka tsindrio ny lahatsary mahita ny fomba ny milina miasa ny ...
Supply Fahaizana: 100 Piece/Pieces per Month
Fandoavam-bola Terms: T/T, Boleto, Mastercard, Visa, e-Checking, Pay Later,
Ny namorona azo namboarina mofomamy amin'ny famolavolana karazana. Toa fomba maro mba hahatonga ny mofomamy, ny sasany kely fivarotana sy ny vehivavy mpikarakara tokantrano manao amin'ny tanana ny sakafo, dia manana mahagaga vidiny sy ny samy hafa ny olona toy izany taona sakafo.
Soa ihany fa ny HJ-860 encrusting milina afaka ny sakafo avo fahaizana. Ny injeniera dia hanampy ny tariby Hetezo milina manao ny mofomamy, fomba izany dia afaka hamonjy vola sy ho tsara tarehy mofomamy. Afaka tsindrio ny lahatsary mahita ny fomba ny milina asa sy ny olana dia mifandraisa ny varotra.
Model laharana HJ-860
fahafahana 5000-6000pcs / h
MOQ 1 voatendry
Product lanja 5-200g / PC
Fe-potoana Tao anatin'ny 7 andro fiasana raha 1 napetraka milina
lafiny 167 * 92 * 129cm
Machine lanja 400kg
1) Fiarovana mandrakotra sy Emergency Stop Button ho an'ny fandidiana soa aman-tsara.
2) Weight, ny habeny sy ny Mizarazara ho sosona nofon-mameno-tahan'ny azo ahitsy conveniently araka ny ilaina.
3) Multipurpose: miasa ny mamokatra karazana sakafo amin'ny alalan'ny miova lasitra fotsiny.
4) Big fahafahana
1) maro karazana mofomamy lasitra azo natao.
2) namboarina milina, dia afaka manampy ny sasany milina rafitra ao amin'ny milina.
3) Anglisy, Sinoa, teny Arabo dia tsy voatery ..
4) fanofanana maimaim-poana ho natolotra raha fitiliana milina mpanjifa.
Previous: Automatic gilasy mochi milina fanaovana
Next: Automatic trondro hena baolina baolina manao milina
Automatic Mochi Manao Machine
Mochi Mameno Mpanao Machine
Small Automatic Mochi Manao Machine
Automatic Breziliana akoho coxinha milina fanaovana
Automatic gilasy mochi milina fanaovana
Automatic arepa milina fanaovana
HJ-860 Panda mofomamy forming milina / natao ...
Automatic trondro hena baolina baolina manao milina
Milina rehetra dia ho feno ny kalitao avo hazo seaworthy baoritra.
Taorian'ny service varotra
Injeniera tsy ampy ny any an-tany hafa mba hametraka sy debug.
Tonga soa eto amin'ny ampanjifaina
dia hanatitra matihanina manolotra araka ny nanontany.
No.88 Xutang Road, distrikan'i Songjiang, Shanghai, Shina